Ekpere iji zụọ di. ? [Ka ịlaghachi alụmdi na nwunye gị]
Ekpere ka emee diIjigide nkwekọ n’ụlọ bụ ọrụ siri ike mgbe ụfọdụ ma enyemaka Chineke ụfọdụ oge. EKPERE iji mee ka di ghara izu ike weta inwekwu ndidi, obi iru ala na nguzozi na ịhụnanya gị.
Onye ọ bụla na-eme ihe dị iche iche n'ọnọdụ siri ike na ndụ. Ọ bụrụ na di gị na-enwe oke nrụgide n’ebe ọrụ ma ọ bụ na ihe anaghị aga dịka e zubere maka ya, kpesie ekpere a ka obi mee ka nwoke ahụ ghara ịma ihe.
Ọ bụ ihe a na - ahụkarị na nrụgide niile nke oge dị mgbagwoju anya na - emetụta gburugburu ezinụlọ. Ọ bụrụ na di gị ma ọ bụ nwunye gị sufferedụrịrị ọdoụ theụ gabiga ókè, ekpere ị ga-eme ka di na-ewe iwe ọsọ ọsọ ma abatala gị oge.
Site n'okwukwe, ọ ga-ekwe omume iweghachi nkwekọ n'ụlọ na alulu gi g’enwe obi uto.
1 Ekpere ka emee di
2 Ekpere iji mee ka di mara ihe ugbu a
3 Ekpere nke Saint Amanso iji zuo di ya
4 Ekpere nye di nọ n'ụlọ - Saint Tame
5 Ekpere nye di nọ n'ụlọ - Saint Catherine
6 Etu esi ekpe ekpere maka itucha di
“Onyenwe m, abata n'ihu gị ugbu a. Jehova di uku, Onye di uku di ike, Onye nwe ayi bu onye di.Idighi Chineke ma obu Gi ma I kari inye aka mee ka olulu di na nwunye buru ibu. Nyere di m aka ịbụ nwoke ka nma, ịdị nwayọọ, na-akwanyere m ugwu, ka mụ na ụmụ anyị na-eme nke ọma karị. Ọ na-akụziri ya otu esi emeziwanye di ya, dịka nna, dịka onye isi ezinụlọ. Achọrọ m ka alụmdi na nwunye m bụrụ ihe ịga nke ọma, mana ihe isi ike a na-ewute mmekọrịta anyị. Nye m amamihe ka m wee nye di m aka ebum n’obi ịhụ nke omume m na mmụọ ime m ka ọ kawanye mma, iwe iwe, iwe m, nwekwuo enyị m. Ana m ekele gị tupu m nweta ngọzi m ga-enweta. A na m arịọkwa gị ọzọ ka ị kụziere m otu m ga-esi soro ya rụọ ọrụ nke ọma ka ọ gbanwee ụzọ ya. Amen.
Ekpere iji mee ka di mara ihe ugbu a
“Oh, ndị nsọ dị ike!
Na ị nwere ike ịghọta mkpu a na-esite n’obi m.
Nke ahụ nwere ike inwe mmetụta ịhụnanya m nwere (dịka ọmụmaatụ, aha onye ahụ hụrụ n'anya).
Ana m arịọ gị, nyere m aka imeri (kwuo aha onye ahụ a hụrụ n'anya) doro anya, maka (kwuo ihe na-eme na ndụ gị) ma chee na m nwere ike ịhapụ gị ruo mgbe ebighị ebi!
Na-arịọchitere m arịrịọ, zere obi gị nke dị ka nkume!
Ma ọ buru na aka-gi rapu inyinya-nzuzu, ọbuná mu onwem mara na aririọm apughi igabiga. Amen
Ekpere nke Saint Amanso iji zuo di ya
Ekpere nye di nọ n'ụlọ - Saint Mark
«(Kwuo ebe a aha onye ị chọrọ ime ka ọ dị jụụ),
Ka Saint Mark mee ka obi dajụọ gị ma mee ka iwe na ọnụma a nke ị na-ebugharị mgbe niile n’ime gị, nke na-eme ka mmụọ gị na mmụọ gị dị nro.
(Kwuo ebe a aha onye choro ime obi ya),
Saint Mark nwere ọdụm, agwọ na anụ ndị a na-apụghị ichetụ n'echiche, na ike ya, ọ nwekwara ike izu ya, mara iwe ya, iwe ya na oke akwara ya niile.
San Marcos nwere ike imetu obi gị, mee ka ọ dịkwuo nro, dịkwa mfe karịa.
Ọ ga-emetụ mkpụrụ obi gị aka ma napụ ya na iwe niile na nnupụisi niile ọ kpatara.
Ọ ga-eme ka ahụ gị dị ọkụ, na-adị jụụ ma dị jụụ.
St. Mark ga-eji ike ya niile mee ka obi dajụọ gị wee kpochapụ iwe niile ị nweburu kemgbe a mụrụ gị. Ọ ga - ewepụ akara a dị oke egwu ka ị bụrụ onye dị iche, ọ ka mma ma dịkwa nwayọ.
(Kwuo aha onye ịchọrọ iwe iwe,)
M na-a Jesusụ iyi na Jizọs Kraịst na o bu obere ya ụdị oke nhụjuanya nke na ọ ga-aerụrị ọ tụ ma zuo ezu ozugbo, na ọ ga-abụ onye dị iche site ugbu a gaa n'ihu na ọ gaghị enwe ahụ ụjọ dịka ọ na-emebu.
Ị ga -achụpụ iwe a niile otu ugboro ma ị ga -abụ onye ka mma na onye dị jụụ.
Ekpere nye di nọ n'ụlọ - Saint Tame
«(Kwuo aha di na -atụ ụjọ),
May Saint Meek mee akara gị, nwere ike Saint Meek wetuo gị obi ma meekwa Jizọs Kraịst ihe nro.
May Saint Tame nwere ike wepu oke iwe a na oke iwe nke na-atọhapụ ndị adịghị mma.
(Kwuo aha di ya na-ama jijiji),
Ka Saint Meek were iwe ọkụ a ma wezuga ya. Kpoo nsogbu gị niile ma dozie iwe niile metụtara gị.
Ka Saint Tame dị ike ma nwee amamihe jikwaa iwepu mmụọ ọjọọ ahụ na-ewute ezinụlọ gị, nke na-anụkwa ka ị na-echegbu onwe gị.
Saint Tame ga-agwọ gị, kpochapụ iwe a niile, nhụjuanya a niile ma mee ka ị sie ike iche nsogbu gị niile ihu na-enweghị iwe na iwe na-enweghị isi.
Saint Tame, na-agwọkwa di m niile, na-azụ ya n'oge ihe siri ike na oge nsogbu nke ndụ ya.
Nyere mkpuru obi gi aka, mmadu gi na omume gi ka odi nma karie ma jie ihe ojoo nke n’abia.
Saint Tame ga -azụ gị, mee ka obi dajụọ gị ma wepụ ihe ọjọọ niile ị nwere.
Ekpere nye di nọ n'ụlọ - Saint Catherine
“Santa Catarina, gị onye tara ahụhụ nke ukwuu na ndụ gị, gị onye agabigala ihe ọ na-enweghị onye kwesịrị ịnagide, a na m arịọ gị ka ị leba anya n'ime mụ na ezinụlọ m ma nyere m aka na di m (kwuo aha di ahụ).
Ahụhụ adịghị ya, iwe ya, ọ na-emekwa ihe ike, amakwaara m na enweghị m ike inwe obi ụtọ.
Achọrọ m inye ya ohere, yana otu ihe ọzọ, yabụ ana m arịọ gị ka nyere gị aka mee ka obi dajụọ ya.
Wetuo di m Santa Catarina, wetuo obi ya, kwusi echiche ya.
Ọ na - enyere gị aka ịnagide oge kachasị mgbagwoju anya nke ndụ gị, ọkachasị ndị kachasị akpata nchekasị, ma na - egbochi irighiri akwara ndị ị na - agagharị kwa ụbọchị, kwa abalị na nkeji ọ bụla.
Ọ na-eme ka obi ruo gị ala, mee ka obi ruo gị ala, meekwa ka obi ruo gị ala, ọ na-agbakasịkwa echiche ọjọọ niile dị n’isi gị nke na-eme ka ụjọ na-atụ gị.
Nyere m aka n’ụbọchị a dị egwu Santa Catarina.
Nyere m aka, ezinụlọ m na di m ka anyị wee nwecha obi ụtọ.
Ekwere m na gị Santa Catarina. Amen
Etu esi ekpe ekpere maka itucha di
E nwere ike kpee ekpere ezinụlọ n’ime ebe a. Site na-ekpegara ha ekpere, ọ ga-wetuo obi ka ọ na-arịọ maka enyemaka iji mesighachi di ya obi.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ikpegara ndị nsọ dị iche iche ekpere ndị a, nsogbu adịghị. Nke a dịkwa mma n'ihi na ọ ga - eme ka ohere nke arịrịọ gị jupụta.
Ekpere iji nyere di aka nwere ike ime kwa ụbọchị. Dị ka o kwesịrị, ị kwesịrị itinye ya n'oge a kapịrị ọnụ ka ị na-echeta mgbe niile ikpe ekpere. Ka ị na-ekpekwu ekpere, otú ahụ ka njikọ gị na Chineke ka ukwuu.
Mgbe ị na-ekpe ekpere ịracha di, ị ga-enwerịrị okwukwe siri ike ma kwenye na Onyenwe anyị ga - eme ihe iji mee ka onye gị na ya ga-enwe udo na udo, n'agbanyeghị ọnọdụ gị.
Kpachara anya: ahịrịokwu dị irè naanị ma ọ bụrụ na ebumnuche ya dị mma. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ime ka di gị kwụọ n’udo iji mee ka alụmdi na nwunye gị gaa nke ọma, ya abụrụkwa ezigbo mmadụ, mgbe ahụ ị nọ n’ụzọ ziri ezi.
Mana oburu na ichoro ime ka di gi buru ohu ya, mara na ekpere a gaghi aru oru ma oli. Ekpere ịrara di ga-arụ ọrụ naanị mgbe ebumnuche ya n’obi dị mma.
Nwee obi ụtọ itinye ekpere a n’ime oge ị ga - eme ma saa ahụ vidio ọzọ nke ga - ewetara ezinụlọ gị udo.
(embed) https://www.youtube.com/watch?v=dS5XLaNQMww (/ embed)
Muta kwa Ekpere maka iweghachi alụmdi na nwunye.
Kpee ekpere ka ịchọta onye na-agụ gị ma bie akụkọ ịhụnanya
Mụta ekpere nke mgbaghara ime mmụọ
Mụta ekpere dị ike iji hie ụra nke ọma